Zụta Pyridoxal-5-phosphate Monohydrate (41468-25-1) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Ndị R & D mmeghachi omume / Pyridoxal-5-phosphate Monohydrate
Rating: SKU: 41468-25-1. Category: Ndị R & D mmeghachi omume
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike site na nchịkọta nke Pyridoxal-5-phosphate Monohydrate (41468-25-1), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Pyridoxal-5-phosphate Monohydrate ntụ ntụ, Vitamin B6 metabolite nke na-eme dị ka coenzyme na mbugharị mmeghachi omume site na ịmepụta Schiff-isi njikọ na lysine iche iche na aminotransferase. Na-ejekwa ozi dị ka coenzyme na ụfọdụ decarboxylation na mmegharị mmeghachi omume. Ị nwere ike igbanwe lysyl na valyl residues na ndi na-edozi. Nwere ikike nke imechi ndị na-anabata ihe na-eme ihe n'echebara na nke intracellular nke Ca2 +.
Pyridoxal-5-phosphate Monohydrate isi Characters
aha: Pyridoxal-5-phosphate Monohydrate
Usoro Molecular: C8H12NO7P
Molekụla arọ: 265.16
agba: Pale Yellow Crystalline
Pyridoxal-5-phosphate Monohydrate okirikiri
Aha Chemical: Pyridoxal- 5a-phosphate monohydrate, 3-Hydroxy-2-methyl-5 - ([phosphonooxy] methyl) -4-pyridinecarboxaldehyde
Aha ndị ọzọ: Vitamin B6, Pyridoxal Phosphate, PLP
Vitamin B6 metabolite nke na-eme dị ka coenzyme na mmegharị omume site na ịmepụta njikọ Schiff-base na otu lysine na aminotransferase. Na-ejekwa ozi dị ka coenzyme na ụfọdụ decarboxylation na mmegharị mmeghachi omume. Ị nwere ike igbanwe lysyl na valyl residues na ndi na-edozi. Nwere ikike nke imechi ndị na-anabata ihe na-eme ihe n'echebara na nke intracellular nke Ca2 +.
Kedu ihe bụ Pyridoxal-5-phosphate Monohydrate
PLP bara uru maka imezi lysyl na valyl residues na ọrụ dị ka coenzyme ke transamination mmeghachi omume site na-akpụ a Schiff-isi linkage na lysine iche iche na aminotransferase
PLP bụ ụdị ọrụ vitamin B6
Na-ejekwa ozi dị ka coenzyme na ụfọdụ decarboxylation na mmegharị mmeghachi omume
Olee otú Pyridoxal-5-phosphate Monohydrate ọrụ
Pyridoxal phosphate (PLP, pyridoxal 5a-phosphate, P5P), ụdị ọrụ vitamin B6, bụ coenzyme n'ọtụtụ mmeghachi omume enzymatic. Ndị ọrụ Enzyme edepụtala ihe karịrị ọrụ 140 PLP, dabere na ~ 4% nke ọrụ niile. Ihe dị iche iche nke PLP na-esite n'ikike ya iji jikọta mkpụrụ osisi ahụ n'ụzọ dị nro, wee rụọ ọrụ dị ka ihe na-akpali akpali electrophilic, si otú ahụ na-edozi ụdị dị iche iche nke mmeghachi omume carbanionic.
PLP na - arụ ọrụ dị ka coenzyme na mmeghachi omume niile, na ụfọdụ decarboxylation, mmechi, na mmegharị mmegharị nke amino acid. Aldehyde otu nke PLP na-etolite Schiff-base linkage (n'ime aldimine) na ε-amino otu otu lysine otu nke aminotransferase enzyme. Otu α-amino nke mkpụrụ amino acid na-ekpughere akụkụ nke ε-amino nke ihe odide lysine na-arụsi ọrụ ike na usoro a maara dị ka transaldimination. Ihe na-esi na mpụga ahụ pụta nwere ike ida proton, carbon dioxide, ma ọ bụ amị acid sidechain ka ọ bụrụ ebe dị njọ, nke n'aka nke ya nwere ike ime dị ka nucleophile n'ọtụtụ ụzọ mmeghachi omume.
Na mbugharị, mgbe deprotonation na ndị na-eme ihe ọjọọ na-anabata proton n'ọnọdụ dị iche iche ịghọ ketimine. Ihe na-akpata ketimine na-eme ka hydrolysed dị ka ndị amino na-anọgide na mgbagwoju anya. Tụkwasị na nke a, aminotransferases (ma ọ bụ transaminases) na-eji PLP eme ihe dị iche iche dị ka perosamine na desosamine. Na mmeghachi omume ndị a, PLP jikọtara na glutamate, nke na-enyefe mkpụrụ alpha-amino ya na PLP iji mee pyridoxamine phosphate (PMP). PMP mgbe ahụ na-enyefe mmanụ aṅụ ya na sugar, na-eme ka shuga dị amino.
PLP na-emetụtakwa mmeghachi omume dị iche iche nke beta dịka mmeghachi omume nke serine dehydratase na GDP-4-keto-6-deoxymannose-3-dehydratase (ColD).
Ọ na-arụsi ọrụ ike na mmeghachi omume mmeghachi omume na heme synthesis. PLP na-ekere òkè na ntughari nke levodopa n'ime dopamine, na-eme ka ntụgharị nke neurotransmitter glutamate na-emepụta ihe na-eme ka GABA neurotransmitter na-emechi, na-enyekwa ohere ka SAM bụrụ nke a na-eme ka ọ bụrụ propylamine, nke bụ ihe dị na polyamines.
Nke a bụ ụdị ọrụ VITAMIN B 6 na-arụ ọrụ dị ka coenzyme maka njikọ nke amino acid, neurotransmitters (serotonin, norepinephrine), sphingolipids, aminolevulinic acid. Mgbe a na-amanye acids amino, pyridoxal phosphate na-agbanwegharị ya na pyridoxamine phosphate (PYRIDOXAMINE).
site na MeSH
Pyridoxal Phosphate bụ ụdị ọrụ vitamin B6 na coenzyme maka ọtụtụ pyridoxal phosphate (PLP) -dabere enzymes. PLP na-etinye aka n'ọtụtụ enzymatic transamination, decarboxylation na mmegharị mmeghachi omume; ọ dị mkpa maka njikọ nke amino acid na amino acid metabolites, nakwa maka njikọ na / ma ọ bụ catabolism nke ụfọdụ neurotransmitters, gụnyere ntụgharị nke glutamate n'ime gamma-aminobutyric acid (GABA) na levodopa n'ime dopamine. E nwere ike iji PLP dị ka ihe oriri na-edozi ahụ n'ihe gbasara vitamin B6 erughi. Mbelata nke PLP na ụbụrụ nwere ike ime ka ọ ghara ịdị na-agwọ ọrịa.
Pharmacology si NCIt
Nke a bụ ụdị vitamin B6 na-arụ ọrụ dị ka coenzyme maka njikọ nke amino acid, neurotransmitters (serotonin, norepinephrine), sphingolipids, aminolevulinic acid. N'oge amamị amino, pyridoxal phosphate na-agbanwe nwayọ ka ọ bụrụ pyridoxamine phosphate (pyridoxamine). - Pubchem; Pyridoxal-phosphate (PLP, pyridoxal-5a-phosphate) bụ onye na-arụ ọrụ nke ọtụtụ mmeghachi omume enzymatic. Ọ bụ ụdị vitamin B6 na-arụ ọrụ nke nwere ogige atọ sitere n'okike, pyridoxal, pyridoxamine na pyridoxine.
Ndi Pyridoxal-5-phosphate Monohydrate Nwere Nmetụta Ọ bụla
Esi zụta Pyridoxal-5-phosphate Monohydrate si AASraw